Push ziviso Ads Network - CASE DZIDZO 05
Heino nyaya yekudzidza kubva kune mumwe wevashambadziri vedu, uyo akashandisa yedu Push ziviso shambadziro fomati.
Pushidzira ziviso kushambadzira
Chikamu 3 GEO's
3 zvisikwa zvakagadzirwa
1 zuva rekare mushandirapamwe
Kuongorora nekuwedzera kugadzirisa.
Push Ads muFroggy Ads anoshanda pane iyo CPC (Mutengo-Per-Dzvanya) yemutengo modhi. Iwe unobhadhara chete kana mushandisi akadhinda kuburikidza neshambadziro yako Kutanga kubhidha pa $ 0.003 chete, zvinoenderana negeo.
Ndinyore Ini Up Zvino
Push kushambadzira iri mhando nyowani yemuno ad ad fomati, inopa isiri-yekuvhiringidza, mushandisi-inoshamwaridzika uye ine-inokwezva-nzira nzira yekuti vashambadziri vabatanidze zvakare nekukudza vateereri vavo. Kuita zvakasarudzika zvakanaka kune chero chero mhando yemashambadziro ekushambadzira, aya anopindirana mameseji ekushambadzira anotumirwa zvakananga kune vashandisi 'nhare kana desktop desktop chero nguva, chero kupi!
Nei uchifanira kushandisa Webhu Push Notifications?
Webhu Push Notifications ndeaya mameseji anodzvanywa anoonekwa pane desktop yako, nharembozha kana piritsi kunyangwe iwe usiri online. Aya mameseji anounzwa munguva chaiyo uye izvozvi ari kushandiswa zvakanyanya nevashambadzi kune inoshanda kutaurirana. Kutsvagurudza kunoratidza kuti inopa 10X yakawanda CTR kana ichienzaniswa nemaemail.
Kune zvakawanda zvakanaka zvekushandisa Webhu Push Notifications. Inowedzera iyo CTR, inosimudzira kubatanidzwa kwevatengi, nyore kunyorera, inochengetedza zvakavanzika, inoshandisa nguva shoma uye zvimwe zvakawanda. Push Notifications ikozvino yave svikiro rinonyanya kushandiswa pakukurukurirana. Zvakanaka, chikonzero chekutanga hachisi chinhu kunze kwezvakanaka pamusoro peemail. Mutengo wekupinda muemail ndeye 5% -10% nepo Webhu Push Notification iri 10% -20%. Uye tichifunga nezve kubaya-kuburikidza chiyero, chiri 4% -5% yeemail apo iri kusvika pa40% yeWebhu Push Notifications.
Kana iwe ukatora mashandisiro eWebhu Push Notification indasitiri zvine hungwaru, iwe uchaona kuti Ecommerce indasitiri inoshandisa 21%. Fashoni indasitiri inoishandisa zvakanyanya (inoda kusvika 70%). Iyo webhu inosundira ziviso yekushandisa mune midhiya / blog iri 18% kunze kweiyo 44% inoshandiswa kutumira Kunze Nhau. 3% inoshandiswa kutumira mifananidzo yazvino, mavhidhiyo nezvimwe.
Kana zvasvika kune indasitiri zvine hungwaru mashandisiro eWebhu Push Notifications, tinogona kuona kuti indasitiri yega yega inoishandisa pazvinangwa zvakasiyana kusimudzira kutengesa kwavo uye kuita.
Push Ads: Maitiro Ekugadzira Push Ads Inotendeuka (Ndokumbira kuti uverenge)
Yedu Push Ads Zvemukati Policy
MHANYA PUSH ADS MUFROGGYADS
HANDINA NHAU, NDISIMBISE!